Kedu ụdị mmega ahụ nwere ike inye aka belata Ọrịa nkwonkwo?
Mmega ahụ Nwere Ike elie Wepụ Obi Mgbu Ọrịa ogbu na nkwonkwo nwere ike ime ka anyị kwenye na nkwonkwo anyị chọrọ izu ike, mana ihe na-abụkarị eziokwu. E nwere ọtụtụ ụzọ […]
Nchoputa ohuru RA na Egwu
Dịka ndị ọrịa RA chọpụtara ọhụrụ achọpụtala weebụsaịtị m ma degara m leta, ihe abụọ na-eme: 1) Obi m dị arọ maka ndụ ọzọ nke ọrịa a jọgburu onwe ya metụtara.
Ọgwụ RINVOQ Maka RA / RD
Ọgwụ ọhụụ m nwetara iji nwaa maka ọrịa rheumatoid (RD) bụ ọgwụ RINVOQ ọhụrụ site na AbbVie. RINVOQ bụ aha mbadamba mkpụrụ ọka upadacitinib, nke FDA kwadoro ka ọ gwọọ ọrịa rheumatoid ogbu na nkwonkwo (RA) n'ọnwa Ọgọstụ (2019). N'oge ule ụlọ ọgwụ, a na-akpọ ya ABT-494, ọ bụrụ na ị na-eso ọgwụ ọgwụ RA ọhụrụ na ọkpọkọ.
Ebenezer Yeboah Nwere ike 29, 2020
Taa, anyị na-enyocha banyere ojiji hydroxychloroquine na nsogbu nke ntiwapụ nke ọrịa na-akpata. Esowo m ọtụtụ n'ime eziokwu ndị a ka ha na-akọ na akụkọ akụkọ yana na Twitter, mana agbalịwo m iji ihe odide ala ala dee eziokwu banyere ebe a n'ihi na enwere ọtụtụ akụkọ ụgha ndị metụtara COVID-19.
RA bụ ọrịa na-aga n'ihu, na-akawanye njọ ka oge na-aga. Ma usoro mgbanwe a nwere ike jiri nwayọ nwayọ nwayọ site na ọgwụ ndị na-agbanwe ọrịa.
Ọrụ nke implant sonication na nchoputa nke periprosthetic ubu ọrịa Ndị a edemede zubere inyocha uru nke implant sonication ọmụmụ ọdịbendị na nchoputa nke ubu periprosthetic nkwonkwo […]
Nsonaazụ nke ubu azụ jiri udiri obere mkpụmkpụ site n'iji oke omumu ede ndị a dere ede na “iwere ọnọdụ ịkụnye ihe ndị a nwere ike bụrụ ihe ịma aka n'iji usoro nkwenkwe ụgha ha”. Ha bu n'obi […]
Ndidi bụ omume ọma
Mgbe oge siri ike, anyị nwere ike ịmụta ihe site n’ile ụwa nke ụwa. Igwe a na-acha anụnụ anụnụ na-ahụ anya na-eche ma chere ruo nwa oge na-enweghị ịkọ. Dị ka azụ […]
Usoro ngwa ngwa biosensor ọhụụ nwere ike inye aka na njikwa gout
N’edemede na-adịbeghị anya bipụtara na mbipụta February nke akwụkwọ akụkọ sensọ, ndị na-eme nchọpụta na Mahadum Texas A&M akọpụtala teknụzụ nke nwere ike inyere ndị nwere ọrịa ọrịa gout aka […]